I-Donskit Guesthouse Room 2 - I-Airbnb
I-Donskit Guesthouse Room 2
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguTsewang
I-Donskit Guesthouse ngumxube okhethekileyo we-Ladakhi yesintu kunye neendlela zaseNtshona, ogcwele uthando, ukuhleka nokutya okufudumeleyo kwentsapho eqhubayo. Sinikezela ngegumbi elitofotofo kubahambi, iintsapho, abahlobo okanye izibini kunye nesidlo sakusasa!
Yimizuzu embalwa yokuhamba ngemoto ukusuka kwezona zinto zinomtsalane kwesi sixeko, njengeMarike Ephambili, iHolo yaseShanti neSanti Stupa.
Umbuki zindwendwe wakho unemoto enokukuthatha ize ikuhambise kwisikhululo seenqwelo-moya ngemali ebizwayo.
INTSAPHO YETHU YONKE IGCINIWE
Indlu yeendwendwe inesakhiwo esahlukileyo seendwendwe, apho iindwendwe zinokuphumla ngaphandle kokuphazamiseka. Ngegumbi lokuhlambela elincamathele kamnandi, amanzi afudunyezwe ngelanga, umabonakude kunye nebhedi etofotofo ngokugqithisileyo, iDonskit Guesthouse ijonge ukuba likhaya lakho kude nekhaya kwisixeko esihle saseLeh.
Iploti izaliswe ziintyatyambo kunye nezityalo zasekhaya, nto leyo enomtsalane kakhulu kwiintlango zaseLadakh. Isidlo sakusasa kunye nesidlo sakusihlwa sinikezelwa kwigumbi lokuhlala laseLadakhi, kwaye iti ikhululekile ukuhamba ngamaxesha onke!
Umgama nje wemizuzu elishumi ukusuka emarikeni, umgama wemizuzu emihlanu ukusuka eShanti Stupa kunye nemizuzu elishumi elinesihlanu yokuqhuba kude nesikhululo seenqwelomoya, iDonskit Guesthouse ibekwe ngokulula ukuba ibe kufutshane ngokwaneleyo kwisenzo kodwa ukude ngokwaneleyo ukuba ungakonwabela uxolo lwakho noxolo!
Indlu yeendwendwe ikwaqhayisa ngefama yendalo ekhula kwaye igcine yonke imifuno yendalo kwaye ikuvumela ukuba uzame isandla sakho ekulimeni, ukuba uyathanda.
Kukho izinja ezimbini ezinobuhlobo ezilahlekileyo eziza kukundwendwela amaxesha ngamaxesha, zikhululeke ukolula isandla sobuhlobo, siqinisekile ukuba ziya kuphakamisela inzipho kuwe.
Umbuki zindwendwe ngu- Tsewang
Sithetha isiNgesi, isiHindi nesiLadakhi. Iindwendwe zikhululekile ukuba zizulazule kwipropati, zibandakanyeke kumdlalo wobuhlobo webhola kunye noonyana ababini.